China Agaro oligosaccharide mveliso kunye nabenzi | HQG
I-Fujian Global Ocean Biotechnology I-Agaro-oligosaccharide inezinto ezithile ezizenzekelayo zebhayoloji, ezinjenge-anti-oxidation, anti-ukudumba, intsholongwane kunye nokuthintela ukubola, njl.njl. kunye nomgangatho we-EU. I-Fujian Global Ocean Biotechnology I-Agaro-oligosaccharide luhlobo lwe-oligose ngenqanaba le-polymerization (DP) ye-2 ~ 12 emva kwe-hydrolysis, ene-viscosity ephantsi, ukunyibilika okuphezulu, indawo yokubanda ephezulu kunye nomsebenzi ophakamileyo.
Njengohlobo lwe-polysaccharide yaselwandle, i-agar eqhelekileyo ine-viscosity ephezulu kunye nokunyibilika kwamanzi okuphantsi, akukho lula ukufunxwa, ke kuncinci kakhulu kwisicelo. Kodwa i-agaro-oligosaccharise ngokuthotywa komzimba, inyibilikile emanzini, ibe luncedo kumzimba womntu ekufunxeni, ingesilo kuphela uphawu lwee-oligosaccharides ezisebenzayo, ikwanazo neempawu ezibonakalayo ezingafakwanga indawo ye-oligosaccharide eqhelekileyo, enjenge-anti enamandla -umhlaza, i-anti-oxidation, imisebenzi echasene nokudumba, ukumelana nokubola kunye nokuguga kwesitatshi esinganyangekiyo, sesinye sezona zinto zinamandla okuphucula ii-oligosaccharides.
1. Iziphumo zamathumbu eprobiotic
I-Fujian Global Ocean Agaro-oligosaccharides inokukhulisa i-bifidobacterium kunye ne-lactobacillus, ilinciphise kakhulu ixesha lokukhula kweebhaktiriya eziluncedo, ikhuthaza ukukhula ngokukhawuleza. Inokuchasana nokwetyisa ngee enzymes eziphezulu zesisu. Emva kwe-24H yonyango ngee-enzymes eziphezulu zesisu, phantse zonke ii-oligosaccharides azichaphazeleki yi-amylolytic enzyme. Ayinakucolwa okanye ifunxwe sisigulo esiswini somamkeli kwaye inokufikelela kumathumbu amakhulu.
2. Ukuthambisa nokuwenza mhlophe
I-oligosaccharides yoLwandlekazi lwe-Fujian ibonise i-hygroscopicity elungileyo kwaye ineziphumo zokuthambisa.
Ngokusebenza kwayo okungafaniyo nokuthintela imisebenzi ye-monophenolase kunye ne-diphenolase ye-tyrosinase, inokunciphisa ukwakheka kwe-melanin eluswini kwaye inemisebenzi elungileyo yokuthintela. Ke ngoko, inokongezwa kwizithambiso njengesithako esimhlophe.
3.Anti-ithumba kunye nokomeleza komzimba
Ithintela ukuveliswa kweeseli zomhlaza ngokuthintela ukusebenza kweeseli ezinesifo somhlaza esiswini, umhlaza wesibindi kunye nomhlaza wesinyi, kunye nokuthintela ukuveliswa kweprostagladin PGE2 kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwethumba necrosis factor TNF-α, ngaloo ndlela kuthintela ukuveliswa iiseli zomhlaza.
4. Iziphumo zebacteriostatic
Njengolondolozo lwendalo olulungileyo, inefuthe elinamandla le-bacteriostatic kwaye inokunciphisa ngokufanelekileyo ukuveliswa kweekoloniyali ezinobungozi xa uxinzelelo lufikelela kwi-3.11%. Sisilondolozi esenziwe nge-agarobiose enokusetyenziselwa ukugcina ukutya kunye neziselo zintsha kwaye kuthintele utshintsho lombala, urhwaphilizo kunye neoksijini.
5. Iziphumo ezichasayo
Ukulungiselela ngomlomo kunokuthintela nokunyanga isifo samathambo esinganyangekiyo, ngaphandle kwe-cytotoxicity. Ikwathintela ukuveliswa kwe-NO (i-nitric oxide egqithileyo ibangela isifo samathambo), enokusetyenziselwa ukuthintela nokunyanga izifo ezinganyangekiyo ezivuthayo ezinje ngesifo samathambo.
1. Icandelo lezonyango
Iziyobisi ze-Anticancer: I-enzymatic hydrolysis yayisetyenziselwa ukufumana i-oligosaccharide. Emva kweentsuku ezili-15 zokulinga imouse, kwafunyaniswa ukuba inhibition ye-64mg / kg ye-oligosaccharide kwiiseli zomhlaza yayiyi-48.7%.
Isiyobisi sokukhusela isibindi: Imolekyuli ephakathi ye-agaro-oligosaccharide (ML) inokukhusela umsebenzi we-SOD kunye ne-GSH-PX, kwaye inefuthe elifanelekileyo lokhuselo ekwenzakaleni kwesibindi.
Iyeza le-Cardiovascular: I-Agaro-oligosaccharide inefuthe elibonakalayo kuthintelo lwe-angiogenesis, ebangelwa ikakhulu kukukhuthaza i-apoptosis yeeseli ze-veil endothelial iiseli kunye nokuvimba umjikelo weseli kwisigaba se-S.
Amachiza anti-ukudumba: Uthintelo kunye nonyango lwezifo ezingapheliyo zokukrala njenge-rheumatoid arthritis.
2. Ukutya okusempilweni
Iimveliso zobisi: I-Agaro-oligosaccharide ayetyiswanga ngumsitho wamathumbu, kodwa inokukhetha ukukhula kwe-bifidobacterium kunye ne-lactobacillus kwezi zimbini zeebhaktiriya ziluncedo kumatshini wamathumbu wokubamba, kwaye kuthintela ukukhula kweentsholongwane ezinobungozi ezifana ne-enterococcus, oko kuphucula Impilo yalo mbuki zindwendwe. Luhlobo olutsha lwee-prebiotic. Ukukhula kokukhuthaza ukusebenza kwe-agar-oligosaccharides kwiiprobiotic kwakungcono kunaleyo ye-pectin-oligosaccharides.
Ukulondolozwa kokutya: Izigcina
I-Agar-oligosaccharide luhlobo lwesilondolozi sendalo, esinokugcina ukutya neziselo zintsha kwaye kuthintele ukutshintsha kombala, urhwaphilizo kunye neoksijini. Iarhente yokugcwalisa: I-Agar-oligosaccharides inokusetyenziswa njengezigcwalisi kunye nokusasaza ngobuswidi obuphezulu kuba aziboli ziintsholongwane zamathumbu kwaye zinobunewunewu ezinokuthelekiswa nezinye ii-oligosaccharides.
3. Ukutya okusebenzayo
Inani elongeziweyo yayiyi-0.05% ~ 10% yesisindo sobungakanani bokutya. Ngokuya kuvavanyo lwenkcubeko, ukhuseleko, ukuxhathisa izifo, ukukhula kunye nenqanaba lokusinda kweentlanzi ezifana ne-tilapia, i-shrimp efana ne-shrimp emhlophe yase Mzantsi Melika, i-shellfish kunye nononkala ziphuculwe kakhulu xa kuthelekiswa neqela lolawulo. I-Agaro-oligosaccharide sisongezo sendalo esilungileyo.
4. Izinto zokuthambisa
Ivela kulwandle oluhlambulukileyo lwendalo, olungenatyhefu kwaye lukhuselekile ukusebenzisa. Kufanelekile ukuba idityaniswe nezinye izinto njengezongezo ezintsha zokuthambisa. Ngapha koko, i-oligosaccharide siswekile engathathi hlangothi, ngaphandle kwenani elikhulu lamaqela ehydroxy kwiiyunithi zayo, kwaye inokudityaniswa nenani elikhulu leemolekyuli zamanzi ukwenza iibhondi zehydrogen. Ke ngoko, i-oligosaccharide ine-hygroscopicity elungileyo. Ngokuthintela ukusabela kwe-oxidation ye-tyrosinase, ukunciphisa ukwakheka kwe-melanin eluswini kwaye wenze mhlophe ulusu.
/ G / cm²）
Qaphela: iparameter viscosity sisisombululo se-1.5% phantsi kwe-100 ℃.
Egqithileyo Agar okhawulezileyo
Okulandelayo: Imilo ecokisekileyo yeCarrageenan